स्वास्थ्य/जीवनशैली – Kumbha Khabar
Babita	 २२ भाद्र २०७६, आईतवार १४:५५ 0
हामी सबै सम्बन्धलाई दिर्घायु बनाउन चाहान्छौ । तर कहिले काही सम्बन्धलाई बचाउन चाहदा चाहदै सम्बन्ध बिग्रीएका उदाहरण पनि हामीले देखेका छौ । यदि तपाँई आफ्नो सम्बन्धलाई लामो समयसम्म टिकाउन चाहानुहुन्छ भने आफूलाई बुझ्ने जीवन साथी रोज्नु आवश्यक…
सेतो पुतलीको आतंकले दृष्टि नै गुम्ने डर
Babita	 २१ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:०८ 0
पोखरामा सेतो पुतलीको आतंकले दृष्टि नै गुम्ने डर बढेको छ । यसको असरले दैनिक चार–पाँच जना बिरामी परेका छन् । यसको असरले ‘सापु’ नामको रोग लाग्छ । जसको कारण आँखा सुख्खा हुन गई रोग लागेको केही दिनमै निको नहुनेगरी आँखाको दृष्टि क्षमता…
Babita	 २१ भाद्र २०७६, शनिबार ०७:०३ 0
डेंगु ज्वरो एक गम्भीर फ्लु जस्तो बिमारी हो, जसले जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ। डेंगु ज्वरोका लक्षणहरू अन्य धेरै भाइरल फेवरहरूलाई ओभरल्याप गर्दै छन्। त्यस कारण डाक्टरहरूद्वारा यसलाई बारम्बार गलत निदान गरिन्छ। आजको परिदृश्यमा, जहाँ…
Babita	 २० भाद्र २०७६, शुक्रबार १४:०७ 0
तौल कम गर्ने सोचमा भएका धेरैले घ्यू खाँदैनन् तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने घ्यूले मोटाइँदैन । वास्तवमा घ्यू विभिन्न गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । घ्यूले खाना पचाउन, घाउ भर्न, एलर्जीलाई टाढा राख्न, हड्डीलाई बलियो बनाउन निकै सहयोग गर्छ । यी…
प्याज र लसुन केबल स्वाद बढाउने खाना मात्र हो ?
Babita	 १९ भाद्र २०७६, बिहीबार ०७:२३ 0
एजेन्सी । स्वादका लागि अधिकांश घरको दैनिक खानामा प्याज र लसुन मिसाइएकै हुन्छ । तर के यी खानेकुरा वास्तवमै पौष्टिक हुन्छन् या यो केबल स्वाद बढाउने खाना मात्र हो ? सबै किसिमका पोषक तत्वहरु प्राप्त गर्न मान्छेहरु विभिन्न रङका फलफृुल र…
अब पिरोका पारखीहरुलाई खुसीको खबर
Babita	 १८ भाद्र २०७६, बुधबार १३:५२ 0
तपाईंलाई पिरो खानेकुरा खान औधी मनपर्छ होला । पिरो धेरै खाएकै कारण अरुबाट यस्तो खानेकुराले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ भन्दै नखाने सल्लाह पनि खुबै पाउनु भएकै होला । तर, अब पिरोका पारखीहरुलाई खुसीको खबर छ । एउटा अध्ययनले पिरोले खानालाई…
यसरी दिनुहोस् बच्चालाई सही दिशा
Babita	 १८ भाद्र २०७६, बुधबार १३:३६ 0
अभिभावकत्व ईश्वरीय देन हो । तर यसमा हामी थुप्रै पटक उल्झिने गर्छौं । कतिले बच्चालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेको सुन्छौं भने अर्कोतर्फ केही मानिसहरुले हामीलाई बच्चाको अत्यधिक हेरबिचार गर्नुपर्छ भनेर पनि सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् ।…
Babita	 १५ भाद्र २०७६, आईतवार ०८:२२ 0
मनोविद् करुणा कुँवर र मनोविश्लेषक डाक्टर गंगा पाठककहाँ परामर्श लिन आउनेहरूमा आजकल इन्टरनेटको कुलत भएकाहरू धेरै हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। बालबालिकादेखि वयस्कसम्म आफ्नो अधिकांश समय मोबाइल, कम्प्युटर वा कुनै पनि ग्याजेट चलाउने भएपछि…
परफ्युम शरीरको अंगमा लगाउनु सही हो त ?
Babita	 १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:०५ 0
शरीर तथा कपडाबाट आउने दुर्गन्ध कम गर्न अथवा बास्नादार बन्न अनि व्यक्तित्वलाई निखारता प्रदान गर्न परफ्युमको प्रयोग गरिन्छ । प्रायः हामी परफ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गला जस्ता शरीरका अंगमा गर्छौ । किनकी यी अंंगहरुमा लगाएको परफ्युम धेरैबेर…
अगरबत्तीको धुँवा चुरोटको धुँवाभन्दा खतरनाक
Babita	 १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:०१ 0
एजेन्सी – धार्मिक कार्यमा होस् वा सांस्कृतिक कार्यमा होस् जताततै अगरबत्ती आवश्यक्ता परेकै हुन्छ। धार्मिक कार्य तथा पूजापाठमा आवश्यक पर्ने अगरबत्तीको वषौँदेखि प्रयोग गर्दै आइएको छ। अधिकांश मानिसहरु पूजापाठको समयमा मात्र नभएर बिहान र बेलुका…